Thenga iPriridoxal phosphate powder (54-47-7) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / IiReagents zeR & D / Pyridoxal phosphate
SKU: 54-47-7. Udidi: IiReagents zeR & D
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-mass order yePyridoxal phosphate powder (54-47-7), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Pyridoxal phosphate powder, ngokunye okubizwa ngokuba yi-PLP, pyridoxal-5'-phosphate okanye i-P5P, yindlela esebenzayo okanye ye-coenzyme ye-vitamin B-6. I-P5P iqulethe ezintathu zendalo zemvelo - pyridoxal, pyridoxamine kunye ne-pyridoxine. Umzimba wakho udinga i-P5P kwimisebenzi eyahlukeneyo kuquka ukukhula kwemisipha kunye nokulungiswa, imisebenzi ye-neurotransmitter kunye ne-metabolism yamandla.
Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) ividiyo
Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) Abalinganiswa basisiseko
igama: Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P)
I-molecular Formula: C8H10NO6P
Isisindo somzimba: 247.14
Melt Point: 139 ku-142 ° C
Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) umjikelezo
Amagama ebhanti: i-Pyridoxal-phosphate
Igama loGeneric: i-PLP, i-pyridoxal-5'-phosphate okanye i-P5P
I-Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) Ukusetyenziswa
I-Pyridoxal-5-Phosphate, okanye i-P5P njengoko iyaziwa ngokuqhelekileyo, ifom ye-vitamin B6. Kwizinto zokutya okanye ezongeziweyo, i-vitamin B6 ifumaneka kwenye yeendlela ezintathu: pyridoxine hydrochloride, pyridoxal, okanye pyridoxamine. Ngaphakathi komzimba, ezi ntlobo zeB6 kufuneka ziguqulwe ngesibindi kwifom esebenzayo umzimba kufuneka - P5P. Ixabiso eliphantsi lokuguqulwa kwi-active to the active vitamin B6 ziye zaxelwa, ingakumbi kubantu abanesifo esibindileyo, isifo se-celiac, abadala abadala kunye nabantwana abane-autism. Ngokutya i-vitamin B6 kwifomu esebenzayo ye-P5P, ukuguqulwa akusekho mfuneko, kunye neenzuzo ezipheleleyo ziyafumaneka ngokukhawuleza emva kokutywala.
Iyiphi imilinganiselo yePyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P)
Ngokutsho "I-Vitamin B6 Therapy: Umphilisa onguMgangatho onguMvelo," i-P5P inokunceda ukukhulula iimpawu ze-seborrheic dermatitis, i-premenstrual syndrome, i-autism kunye neentlobo ezithile ze-anemia. I-dose ephakanyisiweyo ye-P5P iyahluka ngokusekelwe kwintsilelo ethile okanye imeko yonyango ofuna ukuyiphatha kwi-2.5 mg ukuya kwi-50 mg imihla ngemihla. Kodwa ke kufuneka uxoxe neengcali zezokwelapha ngaphambi kokuthatha nayiphi na inkxaso yezempilo-kuquka iP5P.
Indlela iPridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) isebenza
Emzimbeni wakho, i-P5P idlala indima ebalulekileyo kwi-amino acid metabolism, i-heme biosynthesis, i-neurotransmitter biosynthesis, isakhiwo se-collagen kunye nesenzo se-glucocorticoid. Ukongezelela, i-P5P inceda ukulinganisela amanqanaba akho e-sodium kunye ne-potassium ngokulawula ukusebenza kombane weentliziyo zakho, intliziyo kunye ne-musculoskeletal system. Eyodwa kunye kunye nezinye i-enzyme, i-P5P inceda umzimba wakho ukuba wakhe nokwaphula ama-amino acids kwaye utshintshe ama-amino acid ukusuka kwelinye ukuya kwelinye. Ukongezelela, i-P5P inceda ukukhululwa kwamandla agcinwe kwisibindi sakho kunye nezihlunu kwaye kuququzelele ukuveliswa kwee-antibodies kunye neeseli ezibomvu zegazi.
Izinzuzo zePyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P)
I-P5P kunye neengozi ze-Cardiovascular Risk
Ngokutsho kwe-"Vitamin B6 Therapy: Uphilisa okuManyeneyo," ebhalwe nguJohn Ellis, i-P5P inamandla okunciphisa amanqanaba omzimba wakho we-homocysteine. Emzimbeni wakho, i-amino acid homocysteine ​​ayitholakali kwisondlo, kodwa kwenye i-amino acid ebizwa ngokuba yi "methionine." I-Homocysteine ​​yinto ebangela ingozi yokugula kwesifo senhliziyo, kwaye i-P5P inokunciphisa amanqanaba e-methionine emzimbeni wakho, obangela ukuveliswa kwe-homocysteine . Ukongezelela, i-P5P inokukunceda ukukhusela umzimba wakho kwi-heart disease coronary, umfutho wegazi ophezulu kunye nesifo se-cerebral vascular disease.
P5P kunye neCarcer
Ngokutsho kwe "Cecil Medicine: Consulting Consulting," Ukungaphumeleli kwe-P5P kunokuncedisa kwi-cancer ye-pancreatic neyentsholongwane. Kwiimeko ezininzi, abafazi abanomdlavuza wesibeleko banokungabikho kwe-vitamin B-6. Ngokuphathelele umdlavuza we-pancreatic, isifundo esashicilelwe kwi "Journal of National Cancer Institute" sagqiba ekubeni i-26 ekhulwini yeengxaki zomhlaza wamapancreatic zifunyenwe zikhuselwe ukuxhaswa kwe-P5P ngaphambi kokufumana isifo somhlaza we-pancreatic. Abaphandi abazange bapapashe idatha emitsha ebandakanya ezi ziphumo.
I-Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) Ukuthengisa
I-Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) ngokubanzi
Wonke umntu uvile nge-vitamin B6 kunye nabambalwa banokukwazi ukunitshela ukuba ii-vithamini B zininzi zophando kwi-system kunye ne-system ye-nervous. I-Vitamin B6 ibaluleke kakhulu ebomini ngokwayo. Ukuba namazinga aphantsi kwesi sondlo esisisiseko sinokubangela ukuphazamiseka kwesikhumba, ukuxinezeleka, ukuxakeka kwegazi, iintloko, kunye nezinye iingxaki ezinzulu, ezifana nokuhlaselwa yintliziyo kunye nokubetha. Sekunjalo usenokumangaliswa ukuva ukuba i-vitamin B6 yenye yezona zinto zihambelana nokunyanga zonke iintlobo zentlungu. Kodwa akusoloko kulula ukufumana ukutya. Ngaba uyayazi ukuba ukupheka, ukuqhaqha, ukugaya, ukugcina okanye ukulungiselela ukutya kunokunciphisa umxholo we-vitamin B6 kunye ne-50%? Kwaye ngaba uyazi ukuba abanye abantu abakwazi ukusebenzisa iindlela ezithile ze-vitamin B6 ngempumelelo? Kukho uhlobo olukhethekileyo, olusebenzayo lwe-vitamin B6 enokuthi umzimba wakho usebenzise i-pyridoxal-5-phosphate, okanye i-P5P imfutshane. Le fomu inezixhobo zokuphulukisa ezimangalisayo. Ndisoloko ndincoma abantu abanobuhlungu beentlungu, ezinyaweni ezinyaweni (isifo se-diabetis neuropathy), i-carpal tunnel syndrome, i-PMS kunye ne-edema (ukugcinwa kwamanzi), phakathi kwezinye iimeko. Iziphumo zale bantu ziye zagqitywa. Kule ngxaki yeTerry Talks Nutrition, siza kuhlolisisa ezinye zeemeko ezinokuzuza kakhulu kwifom esebenzayo - i-P5P - ye-vitamin B6, kunye nomlingane wezamineral onokuchaphazela kakhulu impilo yakho, okanye ukuthintela uphando oluthile!
Indlela yokuthenga iPyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) esuka kwi-AASraw
Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) Ukupheka